News - Waa maxay taxanaha WPC?
Waa maxay taxanaha WPC?
WPC waa wax yar oo ka kooban alwaax isku dhafan, waxyaabaha ugu muhiimsan waa PE iyo fiilooyinka alwaaxda WPC waxay ku raaxeysataa faa iidooyinka qalabka alwaaxa iyo polymerka Laakiin ka madax banaan cilladooda waa bedel aad u fiican oo alwaax ah. quruxdeeda, bilicsanaanta dhabta ah. Iyagoo adeegsanaya teknoolojiyad casri ah, soosaarayaashu waxay awood u leeyihiin inay si qurux badan u ekeysiiyaan muuqaalka qoryaha dabiiciga ah iyo dhagaxa qiimo jaban.
1.Beautiful qurux iyo xarrago dabiici ah uumbartiisu hadhuudh iyo taabashada leh rakibidda fudud, sidaas awgeed waxay la kulmi kartaa shuruudaha kala duwan ee macaamiisha.
2.Waa la xiiqi karaa, la qodbi karaa, la qali karaa oo la jari karaa si ay ugu habboonaato qalabyada kala duwan.
3.WPC waa caarya-caddeyn, qudhmi u adkaysata iyo kala-qaybin iska caabin ah.
4.Acid-iyo-alkali-u adkaysta, daxalka u adkaysta, qoyaan u adkaysta iyo cayayaanka caabbinta, kuwani waa qaar ka mid ah wax soo saarka WPC.
5.WPC alaabtu rinjiyeyn ma leh, xabagna ma leh iyo dayactir hooseeya, uma baahnid inaad wax badan ku bixiso!
Tayada wanaagsan waxay ka dhigtaa WPC inay tahay mid sibiibix ah, dildilaacyo yar yar iyo xoqan, kabo saaxiibtinimo leh Marka waa caan adduunka oo dhan.
7.Faa'iidooyinka wanaagsan waxay ka dhigeysaa inay leedahay awood cimilo wanaagsan, taas oo ku habboon laga bilaabo-40 ℃ ilaa + 60 S .Sidaa darteed alaabada WPC waxaa loo isticmaali karaa qabowga Iceland, sidoo kale waxay caan ku tahay Afrika kulul.
8.Plus UV lagu daro WPC, markaa waa iska caabin wanaagsan UV iyo iska caabbinta, way sii adkeyn kartaa.So WPC waa xulasho wanaagsan adiga iyo macaamilkaaga.
9.Dhammaan adduunka waxay ka codsanayaan ilaalinta deegaanka, wax soosaarkeena WPC waa bey'ad u fiican, dib loo cusbooneysiin karaa oo aan kiimiko kale oo khatar ah lahayn, waxyeello uma geysan doono deegaanka.
WPC Decking Dayactirku ma yahay mid bilaash ah?
WPC decking wuxuu leeyahay faa iidooyin badan sagxada dhaqameed ee adag hadana wuxuu noqdaa mid caan ah oo sii kordheysa.Laakiin ma jiro decking isku dhafan oo 100% dayactir la'aan ah. Waa ka fudud yahay dhaqammada dhulka dhirta badan leh ee cadaadiska lagu daweeyay.Waa dayactir yar, ha ka welwelin tan.Sidoo kale nabarrada dusha sare waxaa lagu nadiifin karaa biyo diirran oo saabuun leh iyo burush jilicsan ayaa loo baahan yahay qalab ahaan.
Qurxinta WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, alwaax decking isku dhafan, Gogosha WPC, Dabaqa WPC, Bannaanka WPC decking,